ထိပ်တန်းကလပ်အသင်း (၅၀) စာရင်းမှာ အံ့အားသင့်ဖွယ် ရပ်တည်မှု ကျဆင်းခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် | FOX Sports Myanmar
ထိပ်တန်းကလပ်အသင်း (၅၀) စာရင်းမှာ အံ့အားသင့်ဖွယ် ရပ်တည်မှု ကျဆင်းခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်
ယခုနှစ်ရာသီအစမှာတည်းက ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပြီး နှစ်ပေါင်း (၃၀) အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ရတဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ ထိပ်တန်းကလပ်အသင်း (၅၀) စာရင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာ အဆင့် (၄၆) နေရာမှာသာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက မှတ်တမ်းတွေနဲ့ လက်ရှိမှတ်တမ်းတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီး Football World Rankings ကုမ္ပဏီကနေ ဒီစာရင်းကိုပြုစုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဆင့် (၁၂) နေရာသာရရှိထားခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်တော့ အယ်လ်ဟာလီ နဲ့ ကွမ်ကျိုးအဲဗားဂရန်တီတို့လိုအသင်းတွေရဲ့ ကျော်ဖြတ်ခြင်းကိုပါ ခံခဲ့ရပါတယ်။
အခုလိုထုတ်ပြန်ရာမှာ အသင်းတစ်သင်းရဲ့ နိုင်ပွဲတွေ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ရမှတ်အဖြစ်ပြန်လည်ပြောင်းလဲပြီး တွက်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်လို့ မျှတမှုမရှိမှာကို ဘာမှစိုးရိမ်နေစရာမရှိဘူးလို့ Football World Rankings အဖွဲ့ ဆိုပါတယ်ပါ။
ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ ဒီအဆင့်ရပ်တည်မှုမှာ မက္ကဆီကို ၊ ဘရာဇီးလ် ၊ အာဂျင်တီးနား ၊ တောင်ကိုရီးယား ၊ တရုတ် ၊ ဂျပန် ၊ ရုရှား ၊ ကိုလံဘီယာ ၊ ပေါ်တူဂီ နဲ့ အီဂျစ်ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ ကျော်ဖြတ်ခြင်းကိုပါခံခဲ့ရပါတယ်။အသင်းရဲ့ ရလဒ်ပိုင်းနဲ့ အခုလိုပုံရိပ်ကျဆင်းမှုတွေကြောင့် အသင်းနဲ့ ပေါင်သန်း (၄၅၀) တန်စွန်ဆာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခဲ့တဲ့ Chevrolet နဲ့လည်း လမ်းခွဲရမယ့် အရေးနဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
အခုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ထိပ်ဆုံးကလပ်အသင်း (၅၀) စာရင်းမှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းက ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေခဲ့ပြီး လီဗာပူးလ် နဲ့ အာဂျင်တီးနားကလပ် ရေးဗားပလိပ်တို့က အစဉ်လိုက်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိပ်တန်းကလပ်အသင်း (၅၀) ရဲ့ အစဉ်လိုက်ရပ်တည်မှု
2. LIVERPOOL (England)
3. River Plate (Argentina)
4. MAN CITY (England)
5. Valencia (Spain)
6. Real Madrid (Spain)
7. Boca Juniors (Argentina)
8. Athletico Paranaense (Brazil)
9. Palmeiras (Brazil)
10. CHELSEA (England)
11. ARSENAL (England)
12. Atletico Madrid (Spain)
13. Bayern Munich (Germany)
14. Al Hilal (Saudi Arabia)
15. Sevilla (Spain)
16. Tigres (Mexico)
17. Gremio (Brazil)
18. Monterrey (Mexico)
19. Juventus (Italy)
20. Ajax (Holland)
21. Flamengo (Brazil)
22. Eintracht Frankfurt (Germany)
23. TOTTENHAM (England)
24. Napoli (Italy)
25. PSG (France)
26. Porto (Portugal)
27. Guangzhou Evergrande (China)
28. Shanghai SIPG (China)
29. Internacional (Brazil)
30. Kashima Antlers (Japan)
31. Ulsan (South Korea)
32. Al Nassr (Saudi Arabia)
33. Getafe (Spain)
34. Atletico Mineiro (Brazil)
35. Villarreal (Spain)
36. Joenbuk Motors (South Korea)
37. Inter Milan (Italy)
38. Santos Laguna (Mexico)
39. Al Ahly (Egypt)
40. Junior (Colombia)
41. Benfica (Portugal)
42. Roma (Italy)
43. Club America (Mexico)
44. RB Leipzig (Germany)
45. Lokomotiv Moscow (Russia)
46. MAN UTD (England)
47. Atalanta (Italy)
48. Real Betis (Spain)
49. Espanyol (Spain)
50. Lazio (Italy)
ယခိုံစ်ြရာသီအစမြာတည်းက ရလဒ်ဆိုးတေနြဲႛ ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရ္ဘပီိးံစ်ြပေၝင်း (၃၀) အတငြ်းအဆိုးရြားဆုံးမတ်ြတမ်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ရတဲ့ ယိူိုံက်တက်အသင်းကတော့ ထိပ်တန်းကလပ်အသင်း (၅၀) စာရင်းထုတ်ူပန်ခဲ့ရာမြာ အဆင့် (၄၆) နေရာမြာသာ ရပ်တည်ိုံင်ခဲ့ပၝတယ်။
္ဘပီးခဲ့တဲ့ရာသီက မတ်ြတမ်းတေနြဲႛ လက်ရြိမတ်ြတမ်းတေကြိုပေၝင်းစပ်္ဘပီး Football World Rankings ကုမဍ္ဎဏီကနေ ဒီစာရင်းကိုပစြုထုတ်ူပန်ပေးခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်မြာ အဆင့် (၁၂) နေရာသာရရြိထားခဲ့တဲ့ ယိူိုံက်တက်အသင်းအတက်ြတော့ အယ်လ်ဟာလီ နဲႚ ကမ်ြကဵြိးအဲဗားဂရန်တီတိုႛလိုအသင်းတေရြဲႚ ကေဵာ်ူဖတ်ူခင်းကိုပၝ ခံခဲ့ရပၝတယ်။
အခုလိုထုတ်ူပန်ရာမြာ အသင်းတစ်သင်းရဲႚိုံင်ပြဲတြေ စမြ်းဆောင်ရည်တေကြို ရမတ်ြအူဖစ်ူပန်လည်ေူပာင်းလ္ဘဲပီး တက်ြခဵက်ပေးခဲ့တာူဖစ်လိုႛ မ္တွတမမြရြိမြာကို ဘာမစြိုးရိမ်နေစရာမရြိဘူးလိုႛ Football World Rankings အဖြဲႚ ဆိုပၝတယ်ပၝ။
ယိူိုံက်တက်အသင်းကတော့ ဒီအဆင့်ရပ်တည်မမြာ မက္ကဆီကို ၊ ဘရာဇီးလ် ၊ အာဂဵင်တီးနား ၊ တောင်ကိုရီးယား ၊ တရုတ် ၊ ဂဵပန် ၊ ရုရြား ၊ ကိုလံဘီယာ ၊ ပေၞတူဂီ နဲႛ အီဂဵစ်ကလပ်အသင်းတေရြဲႚ ကေဵာ်ူဖတ်ူခင်းကိုပၝခံခဲ့ရပၝတယ်။အသင်းရဲႚ ရလဒ်ပိုင်းနဲႛ အခုလိုပုံရိပ်ကဵဆင်းမတြေေုကာင့် အသင်းနဲႛ ပေၝင်သန်း (၄၅၀) တန်စန်ြဆာ စာခဵပ်ြခဵပ်ြဆိုထားခဲ့တဲ့ Chevrolet နဲႛလည်း လမ်းခြဲရမယ့် အရေးနဲႛ ယိူိုံက်တက်အသင်း ရင်ဆိုင်နေရပၝတယ်။
အခုထုတ်ူပန်ခဲ့တဲ့ ထိပ်ဆုံးကလပ်အသင်း (၅၀) စာရင်းမြာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းက ထိပ်ဆုံးမြာ ရပ်တည်နေခဲ့္ဘပီး လီဗာပူးလ် နဲႛ အာဂဵင်တီးနားကလပ် ရေးဗားပလိပ်တိုႛက အစဉ်လိုက်ရပ်တည်ိုံင်ခဲ့ပၝတယ်။
ထိပ်တန်းကလပ်အသင်း (၅၀) ရဲႚ အစဉ်လိုက်ရပ်တည်မြ
Home Football Premier League ထိပ်တန်းကလပ်အသင်း (၅၀) စာရင်းမှာ အံ့အားသင့်ဖွယ် ရပ်တည်မှု ကျဆင်းခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်